Qayb 5aad: Su,aalaha Dadweynaha in Laga Jawaabo oo la Qanciyo waa Muhiim – Rasaasa News
Rasaasa is featuring the latest news and analaysis in Ethiopia, Ogaden and Somalia.
Qayb 5aad: Su,aalaha Dadweynaha in Laga Jawaabo oo la Qanciyo waa Muhiim
Jul 29, 2009 Jawaabo, saxaafad, warfaafin
Waxaa maanta qoraal noo soo diray akhirste ka mid ah akhritayaasha bogga rasaas.com, qoraalkaas oo isugu jira, war, wax u sheeg iyo su,aalo, ayaa sidii caadada inoo ahayd waxaa inooga Jawaabay H. Magan oo ka mid ah qoraayada bogga rasaas.com
SCW, waan jeclahay bogan waayo waxaa uu sheegaa waxyaabo madan uu bulshada Ogadeeniya iyo halgankeeda dhibaato ku haya oo uu ugu horeeyo Jwxo-shiil iyo kuwa ku daba socda xumaatooyinka. Tan iyo intii aad furteen bogan wax badan baa iska badalay dadweynaha Ogadeeniya, oo u badan wacyi galin iyo wanaag iyo sidii looga dhexsaari lahaa Jwxo-shiil iyo Jwxo-shiilo halganka iyo horumarka Somalida Ogadeeniya.
Waxaan filayaa in aad ku guulaysateen aragtidaas oo maanta ayna ku dhiiran karin Jwxo-shiil iyo kuwa daba socdaa, in ay sameeyaan wixii ay samayn jireen.
Waxaad moodaa in uu soo ururayo wanaag ku saabsan sidii ay ummadu u arki lahayd dhibaatooyinka uu gaystay Jwxo-shiil iyo kuwa la socdaa, waxaana soo if baxaya in garabkii uu ka shahiiday Dr. Dolal in ay maanta bulshada Somalida Ogadeeniya u aragto in uu yahay midka ka saari kara dhibaatooyinka haysta halganka.
Waxaan la socdaa in xubno badan oo gole dhex u ahaa Jwxo-shiil shalay in ay maanta ka soo horjeedaan ayna qorshaynayaan sidii loo xoojin lahaa Garabkii uu ka shahiiday Dolal, oo haatan uu hogaamiyo Eng. Salaxdin Macow, ayna u dhici lahayd doorasho ay ka qayb qaadato bulshada Somalida Ogadeeniya oo dhan.
Hadaba iyada oo ay intaas oo dhan jirto, waxaan u soo jeedinayaa dhaliil Boga rasaas.com oo u baahan in la saxo, waxaa wanaagsanaan lahayd in erayada qayaxan ee magacyada qabyaaladeed wata laga reebo qoraalada [Censorship], si ayna dadku u odhan waxaa jira nacayb beeleed. Su,aalna ha iga ahaatee wararka aad qortaan ma yihiin warar lagu qori karo saxaafada?.
Waxaan akhristow qoraalkaaga iyo su,aashaada u bandhigaynaa, qoraa ka mid ah qoraayada bogga rasaas.com, waana H. Magan, isaga ayaana alaaba ka jawaaba su,aalaha dadweynaha.
Ugu horeyn waxaan salaan qiimo leh u soo gudbinayaa akhristaha noo soo qoray qoraalkan, waxaanan lee yahay waad ku mahadsan tahay waanada iyo wax sheegga wanaagsan ee ay su,aashu daba taal.
Kolka aan arkay qoraal kaaga waxaan isaga qaatay in aad tahay caaqil, caaqilka uma jeedo duqbaad tahay ee kaliya waxaan ula jeedaa garasho badan oo wanaagsan ayaa kaa muuqata, waxaadna mudan tahay in wax lagaa maqlo si, nolosha loogu guulaysto. Waa tii ay maahmaahi odhan jirtay “hadii wax garad la dhagaysan lahaa lax kaliya waraabe ma dileen” oo loola jeedo hadiiba dadka wax garanaya hadalkooda la maqli lahaa dhibaatadu way yaraan lahayd.
Waxaan jeclahay in aan akhritayaasha boggan baro ama u sheego in warfaafintu ay magaca guud ka siman tahay, hadii ay Ideecado yihiin, Telefishin iyo wargaysyo IWM, balse midba wax ayey qaabilsan tahay sida; qaar waxay qaabilsan yihiin, arimaha siyaasadaha culculus, waxbarashada, sayniska, ganacsiga iyo xanta magaalada [tabloids] iyo qaar kale oo badan.
Kuligood war ayey sheegaan waxaana kala xiiseeya akhristayaal badan oo iibsada oo laga yaabo in aadan helinba hadii aad is tidhaah bal galabtii soo iibso. Koligood waxaa lagu furay sharci [licenses], waxayna qoraan wixii sharciga lagu siiyey in ay sameeyaan, hadii ay sameeyaan wax ka baxsan wixii lagu sharciyeeyey waxaa lala tiigsadaa Maxkamad, hadii laga helana waxay bixiyaan dhaawicii ay gaysteen, hadii ay iyagu helaana qolada kale.
Hadaba, inaga warfaafinteenu arimahaas wali ma gaadhin oo waxaa aynu isticmaalaa Internetka oo kaliya, isaguna waxaa uu lee yahay sharcigiisa oo sida aan filayo hore loogu qoray bogan rasaas.com, kol ay dad ka cadhoodeen qoraal aan samaynay, ayna isku dayeen in nalaga xidho bogga wayna ku guulaysan waayeen.
Runtiina way gudbiyeen wixii ay ka cabanayeen laakiin waxaa loo arkay in uu yahay wax aan dhibaato keeni karin dhinac kasta oo laga dhawro.
Talada aad na soo siisay, waxaa dhexyaal laba su,aalood oo ay mid u muuqato talo, balse su,aal ah. Bogaga Internetku waxaa ay akhriyi karaan eray kasta oo dhibaato leh afka uu doono ha ku qoraadee, wayna ka reebaan wixii aan sharci ahayn ee ku jira, waxaa kale oo aan anagu samaynaa in aanu dib u fiirino qoraalka inta aan loo gudbinin dadweynaha. Dhinacyada aan ka fiirino waxaa ka mid ah, marka la akhrinayo sheekada dadku ma fahmi karaan, nuxurkeedu waa sidee, waayo qorayaasha laftigoodu isku mid ma aha mid baa waxaa laga yaabaa in ay akhriyaan qoraalkiisa 2000 oo ruux, midna waxaa akhriya oo kaliya toban ruux.
Erayada aad adigu u aragto in ay qabyaalada yihiin anagu umaba aragno ee waxaan u arganaa in ay yihiin magacyo hebel iyo hebel iyo Ilma hebel, waxanan sheegnaa waxa ay sheekadoodu ku timid iyo waliba ilmo hebelka waxa ay sameeyeen. Hadii la yidhaahdo wiilashani waa reer ama ilma hebel ceeb ma aha, waxaanse filayaa in aad qabyaalad u aragtid hadii la yidhaahdo reer ama Ilma hebel waxaas ayey sameeyeen oo uu wuxu xun yahay.
Waxaan filayaa, marka ruuxa maxkamad la geeyo ee ay goobta yimaadaan laba doodaa oo midkood isaga difaacayo midna mudici ku yahay, in uu ruuxu jeclaan doodaaga yidhaahda hebel dambi ma galin, uuna ruuxu necbaan doodaaga yidhaahda hebel waa dambiile.
waxaadse ogaataa in labada doodaa uuna midna jeclayn ruuxa mina necbayn, balse ay si wada jira u raadinayaan dambiga la galay iyo cida gashay, difaacahaagu haduu og yahay in aad gashay dambiga wuxuu kugu dhiirin in aad qirato taas oo cawin ah lafigeedu.
Hadaba, akhristow bogga rasaas ma kala jecla dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee waxaa uu jecel yahay wanaagooda iyo horumarkooda, cid alaale cidii wanaag samaysana wanaaga ay samaysay ayaa la sheegi cidii xumaan samaysan xumaha ay samaysay ayaa la sheegi, hadii ay dhimbil ka kulushahay.
Hadii aan sheegno beel iyo waxa ay samaysay taas micnaheedu ma aha in la neceb yahay beeshaas ama ruuxaas ee waxaa la sheegay wax ay samaysay oo kaliya, waxaaba laga yaabaa ruuxaas qorayaa in isagu uu yahay beeshaas uu wax ka sheegayo. Qoraayada wararka noo soo qoraa waxay ka soo kala qoraan dacalada aduunka, warkii aan u aragno in ay dadku akhrisan waanu sii daynaa kii aan is leenahay lama akhrisanayo, waxaanu ruuxii soo qoray u sheegnaa in aan la qaadan warkaas.
Waxaan filayaa akhristow in aan ku siiyey hadal faahfaahsan oo isugu jira jawaab iyo garnaqsi H. Magan
Warbixinta Shirkii Horumarinta Waxbarashada Qoraxey Ee San Diego
Ma Rumaysan in Sheekh Shafiif ku Markhaati Furay Bashir Axmed Makhtal[Canadian Citizen]
Tigray: Mawjad Cusub Oo Xadgudubyo Ah Oo Ka Jirta Itoobiya, Sida Ay Sheegeen Kooxaha Xuquuqda
Dec 16, 2021 Rasaas
Jijiga waxaa ka jira Xiisad Ciidan!
Feb 26, 2020 Rasaas
10 Sano Kadib Ergayga Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay oo Tagaya Ethiopia
Dec 2, 2019 Rasaas
Ethiopian Government Sick of Democratic Elections Held in Somalia May 17, 2022
The Somali people in the Ogaden region are on the verge of extinction due to famine and thirst. April 9, 2022
JWXO oo Soo Dhawaysay Go,aamada Itoobiya iyo Ciidanka Difaaca Tigray. March 27, 2022
Ethiopian mercenaries prepare for Russia. March 24, 2022
Ciidamada Liyu Police-ka gobolka Soomaalida oo ka ugaadhsanaya siyaasiyiinta Soomaalida magaalooyinka uu fadaraalku maamulo. February 25, 2022
Xasuuqii Wardheer iyo Xiisaha Taariikhda Febraayo February 22, 2022
Ethiopian Government Sick of Democratic Elections Held in Somalia
May 17, 2022 Rasaas
The Somali people in the Ogaden region are on the verge of extinction due to famine and thirst.
Apr 9, 2022 Rasaas
JWXO oo Soo Dhawaysay Go,aamada Itoobiya iyo Ciidanka Difaaca Tigray.
Mar 27, 2022 Rasaas
Ethiopian mercenaries prepare for Russia.
Mar 24, 2022 Rasaas